News - Waa maxay Bixinta Awooda USB?
Si kastaba ha noqotee, arrintan u hoggaansamida waxay ku saabsan tahay inay ahaato wax la soo dhaafay iyadoo la hirgelinayo qeexida Bixinta Awooda USB. Bixinta Awooda USB (ama PD, marka la soo gaabiyo) waa hal heer oo lacag bixin ah oo loo adeegsan karo dhamaan qalabka USB-ga. Caadi ahaan, qalab kasta oo ay soo rogto USB wuxuu yeelan doonaa adabtarad u gaar ah, laakiin mar dambe maahan. Hal USB PD oo caalami ah ayaa awood u yeelan doona inuu awood u yeesho aalado kala duwan oo kala duwan.
Seddex Astaamood oo Weyn oo ah Bixinta Awooda USB?
Marka hadda oo aad waxoogaa ka ogtahay waxa uu yahay Heerka Gudbinta Awoodda USB, maxay yihiin qaar ka mid ah astaamaha waaweyn ee ka dhigaya mid mudan? Isku aadka ugu weyn ayaa ah in Bixinta Awoodda USB ay kordhisay heerarka awoodda caadiga ah illaa 100W. Tani waxay ka dhigan tahay in qalabkaagu uu awood u yeelan doono inuu ka dhaqso badan yahay sidii hore. Sidoo kale, tani waxay u shaqeyn doontaa aaladaha badankood waxayna u fiicnaan doontaa dadka isticmaala Nintendo Switch, maaddaama ay jireen cabashooyin badan oo ku saabsan inay si gaabis ah u soo rogayso.
Muuqaal kale oo weyn oo ka mid ah USB PD waa xaqiiqda ah in jihada awoodda aan la sii hagaajin. Waagii hore, haddii aad taleefankaaga ku xirto kumbuyuutarka, taleefankaaga ayuu ka qaadi lahaa lacag. Laakiin Bixinta Awoodda, taleefanka aad furayso wuxuu mas'uul ka noqon karaa awood u yeelashada darawalkaaga adag.
Delivery Power sidoo kale waxay hubin doontaa in aaladaha aan la dulsaarin xad dhaaf waxayna kaliya bixin doonaan xaddiga loo baahan yahay ee casiirka ah. In kasta oo inta badan taleefannada casriga ahi aysan ka faa'iidaysan doonin awoodda lagu daray, aalado kale oo badan iyo kombuyuutarro ayaa awoodi doona.
Bixinta Awood - Bixinta Mustaqbalka
Gebogebo, heerkaan cusub ee ku saabsan USB-ka ayaa wax ka beddeli kara adduunka tiknoolajiyadda sidaan ognahay. Ku keenida Awood bixinta, aalado kaladuwan ayaa wadaagi kara kharashkooda midba midka kale isla markaana awood u siiya midba midka kale dhib la'aan. Bixinta Awoodda si fudud ayaa ah mid aad ufudud iyo qaab habeysan oo loo maro in lagaa qaado dhammaan qalabkaaga.
Maaddaama taleefannadeennu iyo qalabkeennu ay sii wadaan isticmaalka xoog iyo xoog badan, Bixinta Awoodda USB waxay u egtahay inay sii kordheyso. Xitaa bangiyada korontada hadda waxay leeyihiin USB PD si ay u soo dallacaan ama u shaqeeyaan aalado u baahan xoog badan (u malee MacBooks, Switches, GoPros, drones iyo in ka badan). Xaqiiqdii waxaan sugeynaa mustaqbal meesha awood lagu wadaagi karo.